Xaalada Garoonka magaalada Kaabul: Kumanaan Qof oo is buurtay iyo Diblomaasiyiin ka cararraya.. (Sawirro) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Garoonka Diyaaradaha magaalada Kaabul ayaa waxaa buux dhaafiyey Diblomaasiyiin, Saraakiil, shaqaalaha Anjabi ah iyo dad u dhashay Afghanistan oo doonaya inay dalkaasi ka baxaan, kadib markii ay xukunka qabsatay kooxda Daalibaan.
Garoonka oo ay gacanta ku hayaan Ciidamada Mareykanka aya waxaa hareysay fowdo keentay inay dadku is buurtaan, waxaana lasoo weriyey in 3 qof ku dhinteen shilka ka dhacay Garoonka, ilaa 7 kalena ay ku dhaawacmeen.
Ciidamada Mareykanka ayaa dadaal habeen iyo maalin ah ugu jira inay dalkaasi ka daadgureeyeen Diblomaasiyiinta iyo Shaqaalaha Safaaradooda, waxay kaloo meel ay geeyaan u raadinayaan dadkii lasoo shaqeeyay oo ka baqaya Daalibaan.
Waxaa xaaladda uga sii daray sida degdega ah ee Daalibaan kula wareegtay caasimadda, waxayna dhammaan Dibloaasiyiintii iyo dadkii kale isku shubeen Garoonka oo buux dhaafay, iyadoo muuqaallo laga soo qaaday ay muujiyeen in rasaas hawada u rideen ciidamada Mareykanka si ay dadka faraha badan u kala kaxeeyaan.
Diyaaradaha tegi jiray Garoonka Kabul ayaa joojiyey duulimaadka markii ay ciidamada Mareykanka shaqadoodii u wareejiyeen si kale, waxaana garoonka tegay diyaarado u kireysan dalalka Reer Galbeedka iyo diyaaradaha Milateriga ee Xamuulka oo daad gureynaya dadka ka cararraya magaalada Kabul.
Previous articleMaxaa keenay in Dalalka Saameynta ku leh Soomaaliya ay RW Rooble ula dhaqmaan sida Madaxweyne..?
Next articleShiinaha iyo Ruushka oo lasoo baxay Weji Cusub oo ay ku Aqoonsanayaan Xarakada Daalibaan